Maqaal: Wadani iska yeel ayaa dadka ugu daran…. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Maqaal: Wadani iska yeel ayaa dadka ugu daran….
September 14, 2018 at 11:55 Maqaal: Wadani iska yeel ayaa dadka ugu daran….2018-09-14T11:55:35+00:00 WARARKA SOOMAALIYA
Markuu buuxsamay tariinkii kasoo baxayay faransiiska una socday ingriiska, si lama filaan ah waxaa is ag fariistay naag faransiis ah iyo nin ingriis ah, naagti cabsi iyo wal wal ayaa wajigeeda ka muuqday, ninkii ag fadhiyaa wuxuu ku yiri maxaad u wal walsantahay.
Naagti waxay ku jawaabtay lacag toban kun oo dollar ayaan wataa lamana ogola, ninkii wuxuu yiri noo kala qaybi cinwaankagana isii guriga aad dagaysid hadii aan la i baarin qaybteyda waan kuu keenayaa, meeshii ayay lacagtii ku kala qaybsadeen,
markii lasoo gaaray askarta ingriiska meeshi ay joogtay ninkii asagaaba u yeeray askartii wuxuuna ku yiri naagtaan lacag badan oo an la ogoleen ayay wadataa qaybna anaa u haya inta kalena ayadaa hayso mana jecli wadankayga in la qiyaano wadani ayaan ahay,
askarigii wuu baaray mise waaba run oo waa siduu ninka sheegay, lacagtii ayuu ka qaaday, kadibna ninkii ayuu u mahad celiyay wuxuuna yiri sidaasa lagaa rabaa wadaninimada hakugu waynaato,
Markii ingriiska la gaaray labo maalin kadib ninkii wuxuu tagay naagtii gurigeeda markaas ayay ku tiri maba xishoonaysid indha adeegaga maxaa iga soo doontay, ninkii intuu dhoola cadeeyay ayuu u dhiibay baqshad ay ku jirto shan iyo toban kun oo dollar wuxuuna ku yiri waxaan waday boorso lacag 3malyan oo dollar ku jirto marka taas ayaan u baqay in la baaro ee raali ahow.
Mararka qaar qofka ka hadlaayo wadaninimada waxaa laga yaabaa inuu asaga tuug wayn yahay oo ku dhuumanayo.
Xigasho: Cabdulaahi Sama Qaade
« David Silva oo sheegay kooxda uu ku biirayo markuu ka tago Manchester City iyo Goorta
Raheem Sterling oo Shardigaan culus ku xiray inuu heshiis cusub u saxiixo Manchester City »